Ọkara ndụ nke Social Media Meltdown | Martech Zone
Ọkara ndụ nke Social Media Meltdown
Mgbe m kwuru okwu na San Diego na Social Media Trolls, Nsogbu na blunders, akụkụ kachasị mkpa n'okwu ahụ dum bụ ụjọ na-enweghị isi nke a na-eme site na mgbasa ozi mgbasa ozi mgbe ọ bụla ụlọ ọrụ kwụsịrị.
Ọkara ndụ nke mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya metụtara otu ngwa ngwa ụlọ ọrụ na-esote ọpụpụ.
Na nke ahụ na-eme minit ole na ole ugbu a. Niile uzu n’izu a bụ ọkwa na Amy's Baking Company na Scottsdale, Az. Ugbu a… tupu ị gụọ na post, naanị gụọ a tinye tupu ịga n'ihu.
M bụ kechioma ezu (ma ọ bụ kechioma ezu) na-arụ ọrụ na tech n'akụkụ nke ụlọ ọrụ nri afọ ole na ole gara aga. Margins siri ike, ntụgharị ndị ọrụ bụ ihe nzuzu, ndị ahịa enweghị nkwanye ùgwù, oge na nrụgide ndị njem nri karịrị akarị nkọcha. Agaghị m emeghe onwe m nri metụtara ụlọ ọrụ… mgbe. M nwere ndị enyi na ụlọ ọrụ taa na ọ bụ n'ezie a azụmahịa na ị ga-ahụ n'anya n'ihi na e nwere abụghị ọtụtụ ndị ọzọ uru.
Yabụ, were ya na ị bidola nrọ gị wee wuo bistro gị. Cheedị ugbu a na ị na-agba mbọ ime ka ụlọ oriri na ọ restaurantụ yourụ gị see mmiri wee nwee ohere iji nweta ihu ọha ọha site na ihe ngosi televishọn nke bụ eziokwu.
Kedu ihe nwere ike ịgahie?
Ọfọn… ebe ọ bụ na eziokwu na telivishọn show bụ a multi-nde dollar enterprise na ya onwe ya, e nwere bụ nnọọ a bit. Ọrụ Gordon Ramsey abụghị iji nweta ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ma mezie ya na ihe ngosi ya. Ekiri abịa ghọta eziokwu na ọ bụ ma ịkparị ma mpako… nke ahụ bụ ntụrụndụ. Ebumnuche nke ihe nkiri a bụ iji hụ na ụlọ oriri na ọ isụ isụ gosipụtara na ọkụ kacha njọ ka Maazị Ramsey nwee ike ịga ije dị ka onye mmeri.
A na-akpọ ya Nri abalị, ndi be anyi. Na amaja m na-ekwu na ha na-n'anya implosion… e nwere ihe a video nke na nwunye na n'ụlọ ha na peeji nke.
Nke ahụ abụghị nkatọ zuru oke nke Mr. Ramsey. Ana m ekiri ihe nkiri a, mgbe ọ na-atụ ya ntu, ọ na-atụgide ya. Mana ọ ka bụ onye ọerụ / onye isi nri / ọchụnta ego. Ndị nwe ụlọ kwesịrị ịma ihe ha na-abanye. N'okwu a, ihe ngosi ahụ enweghị ngwụcha obi ụtọ, Ramsey si n'ụlọ nri ahụ pụọ, ụwa wee zaghachi site na mgbasa ozi mmekọrịta site na ịwakpo ndị nwe Samy na Amy Bouzaglo site na Facebook.
Mmelite: Maka nnukwu ihe ngosi banyere etu telivishọn si arụ ọrụ, lee ihe ngosi a Charlie Brooker a:
Amy Boozaglo zara (ugbu a gụọ ya Buzzfeed). Ọ mara mma. N'ezie, ọ jọgburu onwe ya.
Nke ahụ kwuru, ọ bụghị ihe ekwesighi. Amy’s Bakery Company abụghị ụdọ mba, ọ bụ bistro na-alụ ọgụ na Scottsdale, Arizona. Ndị mmadụ na-awakpo Companylọ Ọrụ Bakery Amy eribeghị ebe ahụ, na-agaghị eri nri ebe ahụ, ma agaraghị ama na ọ dị adị ruo mgbe ihe omume na telivishọn.
Ka -tụ Egwu Ahụ Bido
Uzo ozo nke mgbasa ozi nke ndi mmadu bu ihe ndi mmadu meghere blọọgụ ha niile mepee blọọgụ ha wee bido tapa, kpatụ aka na etu ha gaara esi napụta ụlọ ọrụ a na ọnwụ dị ọcha na oke egwu nke ndị nwe ya na-agbachitere onwe ha na soshal midia otu ha mere. Chọpụta… ha emeghị ya nke ọma. Ma enweghị m ike ịta ha ụta. Were ya na ị nọ n'ime akpụkpọ ụkwụ ha, a gosipụtara ọrụ ndụ gị dị ka ihe nro na telivishọn mba, ma hapụrụ gị ndị agha nke trolls na Reddit, Yelp na Facebook na-emebi ụlọ ọrụ gị.
Ọ ga-ewekwa m iwe. M ga-azakwa ya.
Ya mere, Gịnị Ka Anyị Mụtara
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ netụ ahụ nyere uche mba, ihe dị ka ndị na-eso 50k + na Facebook, na - enweghị m ike ikwenye nke a - mana ejiri m n'aka na ha bụ ụlọ iri nri juputara ugbu a. Ha weebụsaịtị na-arụsi ọrụ ike na ọ daa. N'ime ndị niile na-eme ndoputa na Scottsdale ka ha rie na 'ebe ahụ na Nrọ abalị,' ejiri m n'aka na ụfọdụ n'ime ha ga-ala n'ụlọ wee sị… 'Chei, nke ahụ dị mma'!
Ya mere na ọkara ndụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi gbazee. Ewezuga mkpu na mkpu nke ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, ị ga-ahụ na ihe ahụ merenụ abụghị naanị sọọsọ ikuku. O doro anya, ọ na-esi ísì ọjọọ na nkeji ole na ole, mana ọ ga-adị mma n'oge na-adịghị anya.
Ekwenyela na mgbasa ozi mgbasa ozi, ndi bekee. Companylọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịgbake. Amụma m bụ na ụlọ ọrụ Amy na-eme achịcha ga-alaghachi nke ọma.
Tags: amy si eme ụlọ ọrụụlọ ọrụ nriụlọ oriri na ọṅụṅụ
Ikwado azụmahịa gị maka Vidio Ndị Ọrụ
Si na CMS kwaga CMS
Mee 15, 2013 na 11: 01 PM
Asịrị ịntanetị dịka akwụkwọ ọkụ - ha na-agbasa ngwa ngwa ka ha na-enwu. Mana ọ bụ ihe niile etu ị si eme ya. Amy's Baking Company mere ka obi sie ya ike mgbe ha zaghachiri ndị nkatọ ha site na nsọpụrụ ezi omume nke onwe ha, ụlọ akwụkwọ na-atụgharị uche, ịchụ ọgụ, na - nke kachasị njọ - mwakpo nke onwe.
Ndị Bouzaglos nwere ohere iji nweta echiche ọha mmadụ n'akụkụ ha, mana ha gburu ya. Ha gaara enwetara onwe ha ntakịrị ma zaghachi ndị na-akatọ ha na ngwakọta nke amara, ịdị umeala n'obi na ịkpa ọchị nke onwe. Kama nke ahụ, akwụkwọ apoplectic, nke edeghị nke ọma na-ekwe nkwa nsonaazụ dị ka ịgwakọta mmiri hypergolic na igwe rọketi.
N'aka nke ọzọ, lee ka onye nta akụkọ akụkọ ahụ siri mee ka mgbanye ya na ọnwa gara aga n'ụlọ ọrụ TV nke North Dakota, na-agbaso igwe F-bọmbụ dị ndụ ka ọ na-aga n'igwe na nke mbụ (na nke ikpeazụ). N'ikpeazụ, ọ nwaghị ịta onye ọ bụla ụta mana onwe ya, ọ nweghị ajọ echiche n'ebe ọdụ ụgbọ ahụ gbara maka ya, ọ wedara onwe ya ala ma kweta na ya adaala ma chịrị onwe ya ọchị maka ya.
N'ihi ya, ọha na eze lere ya anya dị ka nwa okorobịa na-eme ihe n'eziokwu na-eme ihe n'eziokwu. Ọtụtụ mmadụ na-ewe iwe maka ịchụpụ ya karịa okwu rụrụ arụ ọ na-ekwu.
Nwoke ahụ ga-alaghachi ma mee nke ọma.
Ma Amy na-eme ụlọ ọrụ? Ekwenyeghi m na nke a. Ọ ga-abụrịrị na ha ga-anụ ụtọ oge dị mkpirikpi azụmaahịa sitere n'aka ndị na-achọ ịmata ihe. Fọdụ n'ime ndị ahụ nwere ike ịnwa ịkwado ndị nwe ha na esemokwu ma ọ bụ ịchụpụ. Mana obi abụọ adịghị ya na ha ga-ahụ ọtụtụ azụmaahịa ma ọ bụrụ na ngwaahịa nri ha adịghị mma ma dị oke ọnụ, ha na-ejikwa snol na-enye ọrụ.
Mana ihe kachasị egosi na ọganiihu ha ga-eme n'ọdịnihu bụ na nsị, omume na-adịghị mma nke ha gosipụtara n'ebe ndị nkatọ na ndị ọrụ nọ nwere ike ịfufu na mmekọrịta ha na ndị na-ebubata ya, ndị ọrụ banki, na ndị gbara ya gburugburu - na nkenke, onye ọ bụla na onye ọ bụla nwere aka na idebe nke ahụ azumahia.
Mee 15, 2013 na 11: 18 PM
Isi okwu m abụghị ịgọpụ omume ha. Naanị m na - arụ ụka na ọ ga - enwe na azụmaahịa ha. Amụma m bụ na azụmahịa ga-eju anya while nwa oge. -
Mee 16, 2013 na 10: 12 AM
Echere m na unu abụọ ziri ezi, Douglas. Azụmaahịa ga-ebuli obere oge, mana Facebook mmasị na weebụsaịtị wepụtara apụtaghị nnukwu maka azụmahịa ogologo oge n'ọnọdụ dị ka nke a. Nwere ike ha ga - atụgharị ihe a ka ọ bụrụ ihe ga - eme eme? Kpamkpam. Ọ bụrụ na nke a wee bụrụ eziokwu, azụmaahịa ha ugbu a ọ ga-aga nke ọma? Eleghị anya ọ bụghị n’enweghi aha ukwu.
Ugbu a, ha na-ekwu na ha hacked; yabụ ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, ha bụrụkwa ezigbo ndị ọbịa nwere amara, nke a nwere ike bụrụ ọfụma maka ha.
Mee 19, 2013 na 7: 50 PM
Azụmahịa anaghị atụtụ ma ọlị. Emechiri ha nwa oge.
Ha nọ na-eme nyocha jọgburu onwe ya na Yelp maka afọ 2 gara aga maka iji okwu mkparị na ịchụpụ ndị ahịa na-eme mkpesa mgbe ha nwetara nri na-adịghị mma ma ọ bụ jiri nwayọ rụọ ọrụ.
Ha ji mpako kpọtụrụ Ramseys gosipụtara ka o wee nwee ike 'ịgwa ụwa etu nri ha si dị mma.' Echere m na ha chere na ọ ga-eme ka ha daa.
You lere ihe omume ahụ, opekata mpe nkeji ise mbụ? Ndị a abụghị ndị nwe ụlọ nri abụọ dara ogbenye, ha bụ mkpụrụ dị ọcha ma dịkwa mfe.
Mee 20, 2013 na 5: 54 AM
Ihe bụ, ihe kpatara ihe a niile jiri daa na mbụ bụ na nri na ọrụ dị egwu. Nke a abụghị usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, nke a bụ ụlọ ọrụ na-adịghị anapụta ngwaahịa dị mma. Kama ịrụ ọrụ na ihe dị mkpa ha kpọrọ na Ramsay ka o wee nwee ike iwepụ ndị nkatọ ahụ. Ọ bụ nnukwu mpako na iduhie.
Nke a abụghị n’ụzọ ụfọdụ malitere site na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ndị nwe ya malitere nke a. Amụma m bụ na amụma gị banyere mgbake agaghị arụ ọrụ. 🙂
Mee 20, 2013 na 9: 13 AM
Dịka ụfọdụ ndị ọzọ kwuru, ọ bụrụ na ị kiriri ihe omume ahụ n'ezie, ị ga-amata na Amy na Sammy Bouzaglo abụghị ndị ihe ahụ metụtara. Kama nke ahụ, ọ bụ ndị ahịa na ndị ọrụ ka emegburu onwe ha. Inye nri oyi kpọnwụrụ dị ka nke ọhụrụ na ọnụahịa dị elu? Ahia ojoo. Na-akparị ndị ahịa ma okwu ọnụ ma n'ụzọ anụ ahụ maka ime mkpesa ma ọ bụ izipu nri? Ahia ojoo. Inweta ndụmọdụ ndị ọrụ na-enweghị ịgwa ndị ahịa? Ahia ojoo. Na nzaghachi nke ndị nwe ụlọ na mkpesa na nyocha ndị na-adịghị mma na-ekwu maka onwe ha. Ha na-ezukwa foto n'ụlọ nri ndị ọzọ ma tinye ha na Facebook na weebụsaịtị ha dịka nri nke ha. Nke ahụ bụ n'ụzọ doro anya ohi nke arịa ọgụgụ isi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ha zuru ohi foto kemgbe ha tinye na Facebook ha na-arịọ ka ewepu onyonyo a. Ọbụna ụlọ ọrụ PR ha goro kwuru na N'ajụjụ ọnụ na azụmahịa ahụ enweghị ike ịghaghachi nakwa na ọ ga-aka mma ka ha mechie ugbu a ma belata ọnwụ ha.
Ahụghị m ụzọ ha ga-esi lọta site na nke a. Mgbasa ozi ọjọọ nke sitere na ihe omume KN bụ nanị ọnụ mmiri iceberg. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị na-eso ụzọ Facebook, na ọnụ ọgụgụ nke ndoputa edere maka mmemme echi bụ ihe bụ isi ndị mmadụ na-atụ anya na ụgbọ oloko ahụ ga-adị njọ Enwere ọbụna mkpesa Change.org na-ekesa iji nweta Dept. of Labour ka ị nyochaa ụlọ ọrụ ahụ maka ịnara ndụmọdụ ndị ọrụ. Nlebara anya wee mee ka ha mara aha karịa maka mmebi iwu gara aga: Amy Bouzaglo mara ikpe maka izu ohi afọ ole na ole gara aga mgbe ọ gbalịrị ịmepe akara akara n'aka onye SSN.
Ihe m na-atụ anya bụ na ha ga-emeghe oghe ruo mgbe a manyere ha ideba ego. Ha dị isi ike imechi n'ihi akụkọ ọjọọ ahụ, mana n'etiti ihe ha na-akwụ ụlọ ọrụ PR na ọnụ ọgụgụ ikpe ndị ha chere na ha na-ede akwụkwọ na ịntanetị, ego ha nwere agaghị adịte aka.
Mee 20, 2013 na 9: 21 AM
@ facebook-769091638: disqus M lere ihe omume ahụ dum mere n'oge na-adịbeghị anya… ọ dị ka ụgbọ oloko (dịka nke "Kitchen Nightmares" isiokwu nke ihe nkiri ahụ), mana ị na-awụli elu na bandwagon dị ka onye ọ bụla ọzọ na-ewere "Eziokwu Ihe nkiri TV ”dị ka ihe akaebe zuru oke. Isi okwu nke nzaghachi m bụ na ngosi ahụ bụ naanị ihe akaebe nke nnukwu edezi. Ihe isi ike bụ na Ramsey meghere ihe nkiri ahụ na-ekwu okwu nke ukwuu banyere ngwongwo ha (ha bụ achịcha) na kichin ịdị ọcha.
Anaghị m anabata omume ha, ma ọ bụ nzaghachi ha. Isi okwu m bụ na anyị enweghị ihe nkiri dị otu izu iji tụlee nke dugara na ngalaba ndị edeziri ma gbakọta ọnụ iji mee ka ọnọdụ a kwubie. Echere m na ọ bụ ihe nwute na ọtụtụ mmadụ na-enwe a forụrị maka ọnwụ ndị a. Ọ bụ ihe nwute, ma ọ bụrụ na ọ bụghị mwute karịa ka ndị a si emeso ndị ọzọ na ihe omume ahụ. Dịka m kwuru na post ahụ, ọ bụrụ na m tụfuru ihe nchekwa ndụ m ihe karịrị otu nde dollar na ụlọ ọrụ m na-agbada na bọlbụ ọkụ, echeghị m na m ga-aza nke ọma.
Mee 20, 2013 na 11: 27 AM
Nke a bụ edemede izizi m gụrụ nke nwere ọmịiko, ma ọ bụ opekata mpe
ebumnobi, banyere Amy's Baking. Dika imgurian (nwa nwanne nne reddit), onye nkpuru na onye fb na-eso Amy's Baking, aga m ekwu na ndị nwere mmasị
Ha nile bụcha ihe ndị ọzọ ha na-eme “azụmahịa”. Dịka ọmụmaatụ, enwere m "mmasị" facebook gị na-enwe olileanya ịnweta ụfụ ara ndị ọzọ na-atọ ụtọ, ị ga-abanyekwa na ndepụta ozi m. Ozugbo ha "masịrị ha" ha nwere ike ikwu ihe ọ bụla ha chọrọ, m ga-anụkwa ntị niile (anya n'okwu a) ruo mgbe m gwụrụ ha ike. Ha nwere ike were ụgbọ oloko a wee mee ka ọ bụrụ ọla edo, mana ha ga-eme ya? O yighị ka ọ ga-ekwe omume. Site na omume jọgburu onwe ha, ha enwetawo ihe karịrị 50k facebook na-enwe mmasị n'ime ụbọchị ole na ole. Mgbe m masịrị ha, ha nọ na mpaghara 5-10k. Nke a enyela ha ohere ị bụrụ ọnụ ọchị (nke ajọ omume ezoro ezo- naanị bulie ebumnuche na ịkwa arịrị) nke nwere ike gbanwee n'ụzọ dị mfe iji kpalite ahịa ịntanetị. Ben & Jerry na-eme ice cream iji sọpụrụ ndị mmadụ, ya bụ, Stephen Colbert's Americone Dream. Ha nwere ike jiri desser mee ka ịkwa emo ma ọ bụ mepụta ihe ndị dị nzuzu ma tinye foto ha. "Ann Coulter bụ Taco Salad Pụtara." Ihe ndị dị otú ahụ ga-eme ka m na-ele anya, mana ịkwesịrị ime ka anyị nwee obi ụtọ n'ihi na anyị na-echefu ngwa ngwa. M na-echefu ihe ngosi m na-ele n'oge azụmahịa. Ihe ntaneti nke intaneti abughi olulu, o bu ubube. 😉
Mee 20, 2013 na 11: 54 AM
Mmelite: Mmasị: 96,231, ma na-agụta, 10 dị ọhụrụ kemgbe m bidoro ide mmelite a.
All jọgburu onwe ihe wepụrụ mgbidi ma e wezụga nke a post si October: “Anyị na-achọ ịkpọ ha 'Camel Toe Mafia' dị ka ụyọkọ Pussies na-ezo n'azụ ihuenyo kọmputa. Ma ọ bụ na-arụ ọrụ maka YELP ”
O di ka ochicho m nke onye na-eme ihe ntaneti ohuru na-emecha kwusi dika o malitere. Oge na-adịghị ka ha ma na-agagharị na Colonel Meow. GOWỌ!